James Rabefitia: “Talenta marolafy, hitsangana ny “Sekolin’ny Karoka” “ | NewsMada
James Rabefitia: “Talenta marolafy, hitsangana ny “Sekolin’ny Karoka” “
Ho very momoka ny ezaka ho fampivelarana ny zavakanto raha tsy misy ny fifampizarana. Iray amin’ireo dingana holalovan’i James Rabefitia atsy ho atsy izany…
Rafanomezantsoa Todisoa Alain, fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpanakanto, James Rabefitia. Tovolahy mpiangaly karazan-kanto maro ary tia mikaroka zava-baovao isan-karazany hanabeazam-boa ny talentany. Asa soratra no niandohany, ny taona 2007. Avy eo nivelatra tamina kanto hafa, toy ny dihy nentim-paharazana. Nianatra mozika, nandalina ny teatra malagasy, niitatra tamin’ny resaka zaitra na lamaody ary indrindra ny soradihy, mampiaiky izay rehetra manatrika ny fampisehoana ataony miaraka amin’ny namany hafa..
Ny sekoly Rary etsy amin’ny Tahala Rarihasina no namolavola azy sy nahafahany niroso bebe kokoa nandalina ny kanto. Nanangana ny fikambanana Rabefidihy ny tovolahy rehefa nahatsiaro tena ho afaka misidina ny habaky ny kanto ary efa misy 50 isa eo ny isan’ny mpikambana, ankehitriny.
Hatsangana ny “Sekolin’ny Karoka”
Ankoatra izany, mieritreritra ny hanitatra sy hizara ny talentany amina toerana maro Rabefitia, amin’ny alalan’ny “Sekolin’ny Karoka”. Hoezahina hahenika ny Nosy izany ka faniriana ny hiitarany manerana izao tontolo izao, araka ny filazany hatrany. Maro ny zavatra hita ao aminy “Sekolin’ny Karoka”: ny mozika, ny zaitra, ny teatra , ny tontolon’ny asa soratra, sns. “Mikaroka zava-baovao lalandava, indrindra amin’ny resaka lamaody… Ny fanamiana rehetra anaovanay, ohatra, dia izahay ihany no manjaitra azy. Mampiavaka anay ny fanjairana ny gony sy sachet ihany koa” , hoy i James Rabefitia
Tokony hankalaza ny fahadimy taona ny tarika, ny 12 jona izao, saingy hahemotra amin’ny fotoana mahamety azy izany noho ny valanaretina covid-19. Maro be ny seho efa natao, anisan’ireny ny niarahana tamin’ny Gospel Jaws band, izay sady misy an’i James Rabefitia, mpitarika dihy sy mpampianatra ao aminy tarika. Ny “Street dihy” niarahana niasa tamin’ny Aft Andavamamba. Ny “Dihy solo” notanterahina tany amin’ny Nosy Maorisy, ny septambra 2019, ny “Teatra sy dihy” tao amin’ny Plaza Ampefiloha, sy ny “No comment ” Isoraka , Antsahamanitra, sns.